Wararka - Sidee qaboojiyaha iyo kululaynta qaboojiyaha uga qaalisan yahay
Iyada oo la horumarinayo waqtiyada, hawo-qaboojiyaha baabuurka ayaa daruuri ku noqday baabuurka: maanta, aan ka wada hadalno saaxiibbada qaboojiyaha ama kululaynta qaboojiyaha uu ka shidaal badan yahay? Jawaabtu waa qaboojiye
Baabuurtu waxay isticmaalaan hawo diiran xilliga jiilaalka, qiimaha shidaalkuna aad buu u yar yahay, taas oo asal ahaan aan la dayacin.
Marka qaboojiyaha baabuurka la qaboojiyo, wuxuu ku kacayaa saliid badan, maxaa yeelay awoodda hawo qaboojiyaha baabuurka marka uu qaboojiyo waxay u dhigantaa 10% ilaa 15% awoodda wax soo saarka mishiinka. Si aan u sharraxo dhibaatadan si faahfaahsan, waxaan soo saari doonaa gunaanadyo anigoo falanqeynaya mabaadi'da shaqada ee kuleylinta qaboojinta iyo qaboojinta. Bir hore, ha tagin, hoos u eeg.
Waa maxay mabda'a kuleylinta hawo qaboojiyaha?
Ugu horreyn, mabda'a kuleylinta hawo -qaboojintu waa in qaboojiyaha mishiinka u dhex -galo kuleyliyaha, ka dibna hawada kululaynta waxaa lagu afuufaa baabuurka.
Hawada kulul ee hawo -qaboojiyaha uu afuufay ayaa ka timaadda kuleylka uu matoorku soo saaro
Haddaan si fudud u dhigno, “hawada kulul” ee hawo -qaboojiyaha waxay ku tiirsan tahay qaboojiyaha mishiinka si uu u bixiyo ilaha kulaylka, ka dibna marawaxadda qaboojiyaha ayaa kulaylkan ku rida baabuurka.
Sidaan kor ku sheegay, mabda’a hawada diirrani waa in qofka wax afuufa uu hawo kulul ku rido baabuurka, laakiin awoodda wax afuufa waa mid aad u yar, sidaa darteed isticmaalkeeda shidaalku asal ahaan waa mid aan laga fiirsan.
Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa marka baabuurka la kululeeyo jiilaalka, isticmaalkiisa shidaalku aad buu u yar yahay, ama asal ahaan waa dayac. Daar kululeeyaha oo riix badhanka A/C, isticmaalka shidaalka ayaa kordhaya
Markaad riixdo badhanka A/C intaad shidayso kululeeyaha, kombiyuutarka hawo-qaboojiyaha baabuurka ayaa had iyo jeer shaqayn doona.
Inta badan kombiyuutarrada hawo -qaboojiyaha baabuurka waxaa kaxeeya mashiinka, taas oo qasab ku ah inay keento kororka isticmaalka shidaalka iyo culeyska mishiinka. Goobaha qabow ee woqooyiga, daaridda hawo diiran ayaa kordhin karta isticmaalka shidaalka
Waxa kale oo jira saaxiibo ku nool aagagga qabow ee woqooyiga, xataa haddii kulayliyaha la shido oo badhanka A/C aan la riixin, waxay dareemi karaan in isticmaalka shidaalku kordhay. Maxaa socda?
Sababtoo ah waqooyiga qabow, heerkulku aad buu u hooseeyaa, marka marka heerkulka biyaha baabuurku ka hooseeyo qiimaha la dejiyay, si loo ilaaliyo heerkulka shaqada ee mishiinka, kombiyuutarka baabuurku wuxuu kordhin doonaa mugga duritaanka shidaalka si loo ilaaliyo shaqada caadiga ah heerkulka mishiinka.
Waxay la mid tahay inaad dhahdo, durba aad baan u qabownahay, oo waa inaad xoogaa kulaylkayga iga qaaddaa, markaa waa inaan raadsadaa meel aan xoogaa diirimaad ka helo haddaba, ama sideen kaligay u noolaan karaa.
Sidaa darteed, kiiskan, shididda hawada diiran ayaa runtii kordhin doonta isticmaalka shidaalka.
Waa maxay mabda'a qaboojiyaha qaboojiyaha baabuurka (1) Habka cadaadiska
Marka mishiinku kaxeeyo kombaresarada si uu u ordo, kombuyuutarku wuxuu nuugaa heerkulka hooseeya, gaaska qaboojiyaha ee cadaadiska hooseeya ee soo baxa uumi-bixiyaha, wuxuu ku cadaadiyaa heerkulka sare, gaaska cadaadiska sarreeya wuxuuna ka soo saaraa kombaresarada. (2) Habka isu -keenidda (exothermic) Gaaska qaboojiyaha ee aadka u kulul ee heerkulka sare iyo cadaadiska sarreeya ayaa gala kondenserka, cadaadiska iyo heerkulkuna wuu yaraadaa. Marka heerkulka gaasku hoos ugu dhaco 40 ~ 50 ° C, gaaska qaboojiyaha wuxuu noqdaa dareere, isla markaasna kuleyl aad u badan ayaa la sii daayaa.
(3) Habka ballaarinta (ceejinta) Ka dib marka qaboojiyaha dareeraha ahi u gudbo qallajiye qaataha, qoyaanka iyo wasakhda ayaa laga saaraa qallajiye qaataha, ka dibna wuxuu ku qulqulaa waalka ballaarinta iyada oo loo marayo dhuumaha. Dareeraha qaboojiyaha leh heerkulka sare iyo cadaadiska ayaa kordhaya mugga ka dib marka uu dhex maro aaladda waalka ballaarinta, iyo cadaadiska iyo heerkulku aad bay hoos ugu dhacaan, waxaana laga soo saaraa waalka ballaarinta ee ceeryaamo. (4) Ka dib marka heerkulka hooseeyo iyo qaboojiyaha ceeryaamuhu uu galo uumi-baxa inta lagu guda jiro hawsha uumiga, dusha derbiga ee uumi-bixiyuhu wuxuu nuugaa kulaylka hawada ku wareegsan dusha uumi-baxa oo wuu karkaraa oo uumi-baxaa, sidaasna ku yaraysa heerkulka hawada baabuurka dhexdiisa. Iyada oo la raacayo ficilka hawo -qaadaha, hawada qabow iyo kulaylka ee baabuurka ayaa dedejisa isu -gudbinta, taas oo hagaajinaysa saamaynta qaboojiyaha ee hawo -mareenka. Uumiga qaboojiyaha ka dib markuu nuugo kulaylka iyo uumiga ku baxa uumiyaha ayaa mar kale nuugaa kombaresarada, ka dibna habka kor ku xusan ayaa soo noqnoqda.
Qodobka ugu muhiimsan maanta waa in la ogaado in qaybta ugu muhiimsan ee qaboojiyaha qaboojiyaha baabuurta ay tahay “kombaresarada”, oo uu wado matoorku.
Oo waxaan badiyaa riixnaa badhanka A/C, taas oo macnaheedu yahay in kombuyuutarrada qaboojiyaha hawadu bilaabaan inay shaqeeyaan, ka dibna qaboojiyaha ayaa afuufi kara hawo qabow, xaaladdanna, waxay lama huraan u keeni doontaa koror ku yimaada isticmaalka shidaalka baabuurka iyo culeyska mashiinka .
Compressor-ku waa aaladda tamar-cunista ku leh nidaamka hawo-qaboojiyaha baabuurka!
Sababtoo ah awoodda inta lagu jiro qaboojinta hawo -qaboojiyaha baabuurtu waxay u dhigantaa 10% ilaa 15% awoodda soo -saarka matoorka, iyo joornaalka “Cilmi -baarista Tijaabada ah ee Saamaynta Hawada ee Isticmaalka Shidaalka ee Gaadiidka Rakaabka fudud” ee joornaalka farsamada qaboojinta hawada, waxaa sidoo kale lagu xusay in awoodda qaboojiyaha qaboojiyaha. Saamiga isticmaalka.
Waqtiga dhejinta: Oct-08-2021